Samy milaza na ny Emmo/Reg na ny AFP fa… : hisy andian’olona voakarama, handroba sy hanakorontana | NewsMada
Samy milaza na ny Emmo/Reg na ny AFP fa… : hisy andian’olona voakarama, handroba sy hanakorontana
Andaniny, araka ny loharanom-baovao azon’ny mpitandro filaminana, « misy andian’olona voakarama handroba sy hanakorontana, anio, amin’ilay hoe hamoriam-bahoaka etsy amin’ny kianja 13mey. Ankilany, milaza koa ny Antso ho amin’ny Fanavotam-pirenena fa « misy gros bras » voakarama hanandrava ny hetsika. Samy manana ny loharanom-baovaony.
Misy mikononkonona fanakorontanana, fandrobana… mandritra ny fikasan’ny mpanohitra hidina eny amin’ny kianjan’ny 13 mey, anio. Araka ny loharanom-baovao azon’ny mpitandro filaminana, misy ireo andian’olona voakarama hanao izany eto an-drenivohitra. Lasibatra voalohany amin’izany ny lapan’ny Tanàna, ireo Sinoa sy Karana mpivarotra eny amin’ny manodidina, toa ny eny Soarano sy Behoririka. Rehefa misy rahateo ny hetsika mafampana eto an-drenivohitra, heno hatrany ny fisian’ity hoe mpanakorontana, voakarama sns ity.
Araka ny fanazavana ihany, miasa andro aman’alina ny mpitsikilo eo anivon’ny mpitandro filaminana ary manamafy fa misy tokoa ireo mikasa hanakorontana eto an-drenivohitra mandritra ny fidinan’ny mpanao fihetsiketsehana eny Analakely. Misy ny andiana tovolahy voakarama, ny fitaomana olona eny ambany Tanàna, sns.
Efa misy anarana mandeha sy arahi-maso
Milaza ny handray fepetra hentitra ny mpitandro filaminana, ary nanamafy fa hisambotra tokoa raha minia miditra eny ireo mpanao fihetsiketsehana, kanefa tsy nahazo alalana. Hisy ihany koa ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro filaminana manolona ireo mikasa hanakorontana. Fantatra mantsy fa efa misy anarana mandeha eny amin’izy ireo, ary arahi-maso ny momba ireo olona ireo. Raha sanatria misy izany ny korontana, mazava ho azy fa efa fantatra ny olona hosamborina, mety ho voatondro ho tompon’antoka amin’izany.
Etsy andaniny, nilaza ny eo anivon’ny AFP, amin’ny alalan’ny mpitarika azy, Razafimanantany Faniry fa misy miketrika zavatra hafa koa any. « Mibaribary fa misy milisy hokaramaina handrava ny hetsika. Misy « gros bras » ary efa fantatra ireo manomana izany… Mipetraha tsara fa hetsi-bahoaka io ary hatao am-pilaminana », hoy izy, omaly. Nanteriny fa ho avy eo ireo avy any amin’ny faritany. Ireo rava trano sy fananana. Anisan’izany ireo teknisianin’ny fiompiana mipetraka eny Andohatapenaka. Eo koa ireo mpivarotra enjehina, ny mpiasam-panjakana, ny mpianatra, ny sendikà. « Hamaly ny antso ireo ary tokony ho tompon-draharaha avokoa ny rehetra », hoy ihany izy.
Hitsapan’ny mpitondra ny fitiavan’ny vahoaka azy na tsia
Manoloana ireo rehetra ireo, tsy mazava intsony ny ambaran’ny mpitandro filaminana sy ny AFP. Samy efa mahalala mialoha ny hiseho izy ireo. Nahoana no tsy handraisana fepetra ara-potoana avokoa izany rehetra izany ? Be lazao fotsiny ihany ny AFP sa paikady na ady fiady ny nilazany ireo ambara fa misy milisy voakarama any ho any ? Aiza avy ny porofo rehetra momba ireo voalazan’ny andaniny sy ankilany ireo ?
Fomba fiadin’ny mpitondra koa anefa ny mitsapa ny halalin’ny rano amin’ny fitiavan’ny vahoaka azy na tsia ka ampiasainy ny mpanohitra sasany, hatao fitaovana hijereny hoe hatraiza ny vahoaka raha misy ny fidinana an-dalambe ? Tafiditra ao anatin’izany ny AFP amin’ity hetsika hatao anio ity ?
Samy tompon’andraikitra amin’ny ambarany sy ny ataony ny tsirairay ary hotsarain’ny tantara eo avokoa. Matetika anefa ny vahoaka hatrany no mizaka izany rehetra izany ary tratra farany foana !
Synèse R. sy Yves S.